Al-shabaab oo weerarkii Ciidamada madaxtooyada usoo xirtay tuutaha ciidamada – Radio Daljir
Al-shabaab oo weerarkii Ciidamada madaxtooyada usoo xirtay tuutaha ciidamada
Luulyo 15, 2018 8:56 b 0
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in tuutaha ciidamada dowladda ee 14-ka October ee ku jira xerada ciidamada Jen. Gordon loo adeegsaday weerarkii Al-shabaab ay ku qaaday barta kantorool ee madaxtooyada Villa Soomaaliya ee Muqdisho maalinimadii Sabtidii.
Wararka ayaa sheegaya maydadka laba ka mid ah dagaalamayaashii weerarka soo qaaday oo xiran darayska ciidamada 14ka October in laga helay agagaarka Ceelgaabta ee Muqdisho.
Lama oga sida ay ugu soortogashay Al-shabaab inay helaan darayskaasi ciidamada oo horay uu u tababari jiray Imaaraatka Carabta, balse markii dambe ay dowladdu la wareegtay.
Goobta uu weerarku kadhacay ayaa la sheegay inay ka horeeyeen baro kantorool oo aad loo ilaaliyo, waxaana su’aalo ay wali ka taaganyihiin qaabkii ay unugii weerraka soo qaaday ugu suurogashay inay kasoo gudbaan barahaasi ciidan.
Wasiir Ducaalle “Dadka diidan waddooyinka la xiro waa kuwa u adeegaya Al-shabaab”